पत्रकार महासंघको चुनावमा कसले कति भोट ल्याए? मतपरिणामको पूर्ण विवरण – Media Kurakani
August 23rd, 2017 Media Kurakani Media News
नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औँ महाधिवेशनबाट गोविन्द आचार्यको नेतृत्वमा ४७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको छ। जसमा पदाधिकारीसहित अधिकांश पदमा नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टर नेपाल गठबन्धनका उम्मेदवारले जितेका छन्। हेर्नुस् निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतपरिणामः
विजेताहरूको फोटो राससबाट लिइएको हो।
Tags Federation of Nepali Journalists FNJ Election FNJ Nepal
पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा गोविन्द आचार्य निर्वाचित, कुन पदमा कसले जिते? पूरा विवरण »
« विजयकुमार अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको ग्रुप सम्पादक